Indlela Khetha umhlakulo Snow - China Richina
Indlela Khetha umhlakulo Snow
Umhlakulo Snow yenzelwe ukusetyenziswa backcountry ingaphatha iindidi yasekhaya, kodwa ukuhlangulwa udaka kulula lowo oyena ufunwayo. Eli nqaku linika ikhephu-ngomhlakulo iingcebiso zokusebenzisa kunye ngeengcebiso ngendlela uyothenga omnye.
Sebenzisa ukuba Snow nefolokhwe Backcountry
Esona sizathu sibalulekileyo ukwenza enye into xa udaka. Ukuba baxhotyiswa transceiver udaka kunye ixhokonxa kodwa asinayo indlela ukwemba phandle ixhoba, ukuba ukwimeko embi kakhulu.
Wonke umntu iqela, hayi nje-1 okanye ezi-2, ukuya kungena backcountry ubusika kufuneka baphathe yokwemba. Ngeke wazi ukuba ngubani oya ibambeke udaka, kwaye ufuna ukuqinisekisa ukuba zonke nemihlakulwana ezikhoyo akayi kungcwatywa.
Nemihlakulwana ekwasetyenziselwa ukwemba imigodi kujongwa iimeko backcountry snowpack. Rhoqo kulo lonke uhambo, amalungu iqela kufuneka bagqobhozela ikhephu ukubona ukuba kwenzeka ntoni ngeenyawo. A emhadini ikhephu ikuvumela ukuba ukujonga ukuba zikhona-ezi zoleko ababuthathaka ukuba ndinikhululele kwaye uqale sehla. Kuba ngakumbi ukufunda snowpack, bona Icebiso Richina Ltd.
A ukusetyenziswa exhaphake kakhulu nemihlakulwana ikhephu kukuba yokuba bevula indawo kwinqanaba ngenxa yentente yakho xa ikhephu inkampu okanye glacier ukukhwela. Uyakwazi sizakhele a ifestile okanye wemba kwindawo ikhitshi, gqibezela zokuhlala, ukuba sele othanda kangaka.
Mhlawumbi eyaziwa ngaphantsi kakuhle kukuba umhlakulo iza sibe luncedo ukuba ukumba ikhephu entsha ukunyibilika amanzi okusela. Scooping ne entsubeni yakho yamanzi okanye izandla zakho nayo isebenza, kodwa oku ngokukhawuleza kuba kum yaye kubanda.
Kakade ke, iifotsholo backcountry kwakhona ukuba umbe phandle imoto yakho kwindawo trailhead okanye iiholide ski.
Ukuthenga umhlakulo Snow
izinto eziphambili xa Umhlakulo kuthenga zifumana ukulingana amandla, ubunzima, blade ubukhulu / imilo kunye nentuthuzelo okumbophelela.
wenza Backcountry nemihlakulwana ukuba babe ezinamandla ezilula:
6000-series aluminium ezininzi eziqhele ukusetyenziswa ngenxa emigodini nefolokhwe iibhleyidi. Nangona kokulungisa elula, aluminiyam unika amandla kwaye ihlala ezifunekayo ukusetyenziswa olungxamisekileyo.
Enye Uyilo unique, i Claw Snow, usebenzisa, ene- polyethylene ephezulu (iHDPE) ngoko ke lalisongwa yaye igcinwe ngaphakathi pack sakho. Le modeli super-ukukhanya luncedo ngakumbi ikhephu zokukhempisha kunokuba kunjalo lomboniso ukudilika.
Size maliwe nemilo
nobukhulu Blade ziyahluka phakathi imifanekiso. iincakuba ezinkulu kakhulu ikhephu ihamba ngokukhawuleza, kodwa zifuna amandla ngakumbi kwaye ukusebenzisa kwakho ngokukhawuleza. iincakuba ezincinci lula ukuphatha kwaye ukuvumela ukuba ehlohla ngesantya kwithuba elide.
iimilo Blade ezahlukahlukeneyo. iincakuba Flat ezifanele ngokudala iindonga ikhephu-umhadi ziindlela ezigudileyo; a blade edge wona aqoqiwe kunceda umhlola up ngumkhenkce.
Uninzi nemihlakulwana backcountry babe telescoping okanye emigodini abamnkela ukuba luqalise lula pack yakho. Ukuba uvumelane kunye amaqhosha spring-zilayishwe pop zibe imingxunya macandelo kokuxhuma.
Nezibambo ezaphukileyo, ngokokuqhelekileyo eyenziwe ngeplastiki ngenxa kukubamba na lula, kuza ezahlukeneyo iimilo:
I T-ibambelele, nto leyo kozinzo phakathi kweminwe, elula kwaye isebenza kakuhle abantu abaninzi. Abanye Kusenokuba nzima xa enxibe mittens okanye overmitts.
I-D-isango idla bulkier kwaye usinda kancinci. Inikezela uyilo kakuhle kwaye kudla ngokuba lula ukuyisebenzisa ne mittens.
Le L-isango azixhaphakanga, kodwa inikeza ukhetho okulula embhoxo ngesiphatho vaccuum cleaner.
Khetha kunzima elingana kamnandi ezandleni zenu.